Rebecca Watson: "Tsy hetsika katarsis velively ity tantara ity" | tantara foronina - World Book
Ny boky voalohany nosoratan'i Rebecca Watson Little Scratch, izay navoaka tamin'ny kitapo vita amin'ny taratasy ankehitriny, dia notantarain'ny mpianatra birao tsy fantatra anarana niaina taorian'ny fanafihana ara-nofo nandritra ny andro iray. Ny New Yorker dia niantso azy io ho "bintana miavaka [izay] mampita ny endrika sy ny gadona eritreritra" amin'ny "fandaminana ny lahatsoratra amin'ny fomba tsy mahazatra." Voafantina ho amin'ny Loka Goldsmiths tamin'ny taon-dasa izy, vao haingana no niseho tamin'ny famokarana notarihin'i Katie Mitchell. Watson, 26 taona, dia lehibe tao amin'ny South Downs ary nilaza tamiko ny momba an'i London, izay miasa tapa-potoana ho tonian-dahatsoratra mpiara-miasa amin'ny sehatry ny zavakanto ao amin'ny Financial Times.
Inona no nitarika anao ho amin'ny endrika tsy mahazatra ny boky?
Avy amin'ny fotoana tena mazava izany. Nisy mpiara-miasa nandalo tamiko ary nanontany izay novakiko vao haingana. Ary nandritra ny 10 segondra dia tsy nahita valiny aho, dia nataoko ary tsy hita intsony. Tena tia an'io fihaonana io aho, izay tsinontsinona, fa nandritra ny fotoana fohy dia nitombo ny tsatòka. Tena nahafantatra ahy ny sosona sy ny fantsona amin'izao fotoana izao. Tsaroako nieritreritra ny tenako hoe ahoana no hanoratanao azy? Ary avy hatrany dia nanoratra an'io fotoana io tao amin'ny pejy [notebook] aho mba hampisehoana ny zava-mitranga [sy ny eritreritra] miaraka. Teny an-jatony vitsivitsy ihany izany, fa ny valin'ny fanolorana traikefa eo no ho eo amin'izao fotoana izao.
Ahoana ny fomba nanoratana azy?
Amin'ny ankapobeny, rehefa nidina ny pejy ianao dia nandalo ny fotoana, ary tena nahatsapa ho toy ny fanahy ihany koa ny pejy: ny ilany havia sy havanana dia samy nanana fihetseham-po momba azy ireo, ary nisy karazana habaka tonal isan-karazany nanerana ny pejy. Navadiny ny bokotra iray: azoko ny soson'ny rafitra ara-dalànan'ilay boky.
Ny boky dia mikaroka ny vokatry ny fanolanana, fa ny teny miverimberina dia ny "fifaliana".
Fihetseham-po amin'ny fomba firesaka matetika momba ny fanolanana sy ny firaisana ara-nofo izany. Tiako ho afaka hanavaka azy ireo ny protagonista ahy; ny fisarahana azy roa dia anisan'ny faniriany mandritra ny andro [izay ivelaran'ny boky]. Tsy tiany hanimba ny fiainany ara-nofo na ny faniriany ny fanolanana. Toerana nanome hery ho ahy sy ho azy izany, mba hiantohana ny fijanonan'ny fifaliana sy ny faniriana, na dia tsy voatery hisy fanapahan-kevitra aza ao amin'ny tantara.
"Fanehoan-kevitra manohitra ny fomba fikorontanana miresaka momba ny fanolanana sy ny firaisana ara-nofo izany"
Mahatsiaro ho voatery nanao tatitra ve ianao tamin'ny fanekena ny fandraisana?milaza fa foronina ilay protagonista?
Misy mihevitra fa izaho io; Tsy azo ihodivirana izany fa fanolanana izany ary efa nolazaiko teo aloha izany. [tamin'ny ampahany tamin'ny 2019 tao amin'ny TLS] fa nisy nanolana ahy, saingy tsy mitovy amin'ny ahy ny zavatra niainan'ilay mpitantara; misy fomba maro ahafahana manafika ny olona iray ary maro ny fomba ahafahan'ny olona mihetsika. Indraindray aho manenina an'ity sombintsombiny ity, satria fotsiny izy io dia toy ny loharanon'ny dinidinika. Miverina foana io, ary heveriko fa tsy misy ifandraisany amin'izany sy ny scratch kely, fa ny olona dia miezaka ny hampifandray ilay tantara amin'ny tantara ary handika azy io ho toy ny konfesy. Ity tantara ity dia tsy hetsika catharsis velively. Famoronana nahafaly izany.
Efa nifandray tamin'ny boky ve ny mpamaky?
Nahazo valiny tena mampihetsi-po avy amin'ny mpamaky aho izay niharan'ny herisetra ara-nofo na fanolanana, misaotra ahy tamin'ny filazalazana ny zavatra tsapan'izy ireo na ny zavatra niainany, na ny dingana izay sarotra holazaina amin'ny teny na tsy mbola hitany an-tsoratra hatrizay. . . Nahazo valiny avy amin'ny mpamaky lehilahy ihany koa aho izay nilaza fa nahatonga azy ireo hisaintsaina ny fitondran-tenany taloha izany. Mahery ny andaniny sy ny ankilany ary tena mampirehareha ahy izany, saingy hafahafa ny fisian'ireo fanehoan-kevitra ireo.
Nanao ahoana ny fiaraha-miasa tamin'i Katie Mitchell?
Tena milay. Mahery fo izy [ny ahy] ary io no fanapahan-kevitra mora indrindra ny miteny hoe: "Eny, azafady, raiso ary apetaho." Nividy ilay tantara izy noho ny famerenana ny tontolon'ny boky; milaza amiko izy, na mody mody fara faharatsiny, fa mazava ho azy fa fantany fa [karazana] teatrany io nanomboka teo amin'ny pejy voalohany, ary namaky azy io saika toy ny hira. In-dimy teo ho eo aho no nandeha nijery ilay fandaharana tao anatin’ny enina herinandro. Tsy nampino izany.
Inona no iasanao izao?
Ao amin'ny drafitra fahefatra amin'ny tantarako faharoa aho. Tena nazoto tao amin'ilay feo kely mitabataba aho ka nandany fotoana betsaka hianarana ny hisaraka amin'izany. Fantatro [fa] ny fiheveran'ny rehetra ahy amin'ny maha-mpanoratra ahy dia ny an'ny boky, fa tsy ny ahy. Ny manaraka dia tena fatra-paniry laza: dimy andro, mifandimby ny ankehitriny sy ny lasa, izay zava-baovao amiko. Andrana amin'ny fomba ofisialy izy io ary toa hafahafa ao amin'ny pejy. Tantaran’ny vehivavy iray izay nahafantatra ny fahafatesan’ny anadahiny, izay tsy hitany efa ho folo taona izao.
inona Tienen Efa namaky vao haingana ve ianao?
Namaky ny Mayflies an'i Andrew O'Hagan aho tamin'ny Krismasy. Tena mihetsika. Ny fomba fandraisany ny tantaram-pitiavana amin'ny fisakaizana dia tsy fahita firy. Fankalazana ny fiainana tsara tarehy sy tonga ho azy ihany koa izy io, izay tena masiaka tokoa ny mamaky mandritra ny areti-mifindra.
Efa naniry ny ho mpanoratra foana ve ianao?
Nanana io fiara io foana aho [hamorona zavatra amin'ny teny]. Tena liana tamin'ny feo aho, fa tsy voatery mitantara tantara, ary nanoratra tononkalo na andalana foana, hatramin'ny fahatanorako. Mpamaky tany am-boalohany aho ary nandany ny karatry ny tranomboky isan-kerinandro ary namaky sy namaky ary namaky. Raha mbola tantara foronina ilay izy dia tsy nanontany tena aho hoe taiza no nipetrahan'ny rantsantanako. Namaky ny Rebecca an'i Daphne Du Maurier aho fony aho mbola kely noho ny fahitako ny anarako teo amin'ny talantalana. Namaky The Princess Diaries niaraka tamin'ny The Thorn Birds aho; Fizotry ny fifantenana natao manokana izany. Tsy maintsy nanohy namaky araka izay azoko natao fotsiny aho; na inona na inona mety hitranga: toy ny hoe hahita karazana tsiambaratelo aho izay mety ho very amin'ny fotoana rehetra.
scratch kely dia navoakan'i Faber (£8.99). Mba hanohanana ny libromundo sy The Observer, manaova dika mitovy amin'ny guardianbookshop.com. Mety mihatra ny saram-pandefasana
Sokajy Vaovao farany Tags zavatra, catharsis, izany, Fiction, nisy, tantara, nunca, Rebecca, Watson Ticket navigation
Roa ambin'ny folo andro na Putney Bridge
Bacon an'i James Birch mpitsikera ao Moskoa: Tantara maizina sy mahatsikaiky momba ny zavakanto ao ambadiky ny vy | Autobiography sy fahatsiarovana